စပါး နဲ့ ပိုမို နီးစပ်လာတဲ့ ဘေးလ် ၊ ဒီတစ်ပတ်မှာ ပြန်မြင်ရတော့မယ့် ခွန်အား ၁၀၀၀ တို့နဲ့ . . . ယနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ - SPORTS MYANMAR
စပါး နဲ့ ပိုမို နီးစပ်လာတဲ့ ဘေးလ် ၊ ဒီတစ်ပတ်မှာ ပြန်မြင်ရတော့မယ့် ခွန်အား ၁၀၀၀ တို့နဲ့ . . . ယနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
ရီးရဲ တောင်ပံ ကစား သမား ဂါရတ်ဘေးလ် ရဲ့ တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး အသင်းထံ ပြောင်းရွှေ့ ရေး ဟာ နီးစပ် လာပေမယ့် အတည်ပြု လို့တော့ မရ သေးပါဘူးလို့ ဘေးလ် ရဲ့ အေးဂျင့် ဂျော်နသန် ဘားနတ် က ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။ စပါး နည်းပြဟောင်း ဟယ်ရီ ရက်နက် ကတော့ ဘေးလ် ၊ ဆွန်ဟောင်မင် နဲ့ ဟယ်ရီ ကိန်း တို့ ရဲ့ တိုက်စစ်ဟာ စပါး အတွက် အောင်ပွဲတွေ ကို ယူဆောင် ပေးလိမ့်မယ်လို့ ပြောဆိုရင်း ဘေးလ် ရဲ့ ပြန်လာ နိုင်မှုကို ကြိုဆို စကား ဆိုသွားခဲ့ ပါတယ် ။
ရှက်ဖီး ယူနိုက်တက် နည်းပြ ဝိုင်းဒါးလ် ကတော့ စပါး ကို ဂါရတ်ဘေးလ် ရောက်ရှိ လာတာဟာ သူတို့ အတွက် ခက်ခဲ နိုင်ကြောင်း ၊ ဘေးလ် အနေနဲ့ ရီးရဲ မှာ ဆက်နေသင့်ကြောင်း ၊ စပိန် မှာ အင်္ဂလန် ထက် ဂေါ့ဖ် ကွင်းတွေ ပို ကောင်းကြောင်း အရွှန်းဖောက် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် တိုက်စစ်မှူးကြီး ပီယာ အင်းမရစ် အော်ဘားမီးယန်း ဟာ အာဆင်နယ် နဲ့ စာချုပ် သက်တမ်း မတိုးမီ မှာ ဘာစီလိုနာ အပါ အဝင် ဥရောပ ထိပ်သီး ကလပ် ၂ သင်း ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှု ကို ငြင်းဆန် ခဲ့တယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ တိုက်စစ်မှူး လူးဝစ် ဆွာရက် ဟာ အီတလီ နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင် ကို အချိန်မီ မရရှိ ခဲ့တာကြောင့် ဘာစီလိုနာ ကို ပြန်ရောက် လာခဲ့ပြီး လေ့ကျင့်ခန်း ပြန်ဆင်း ခဲ့ရ ပါတယ် ။ ဘာကာ တိုက်စစ်မှုး မက်ဆီ ကတော့ ဆွာရက် ကို အသင်းမှာ ဆက်နေဖို့ အတွက် လက်ကျန် နေ့ရက်တွေ မှာ ဆွဲဆောင် တိုက်တွန်း သွားမယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ဟာ လူးဝစ် ဆွာရက် ရဲ့ နေရာ အတွက် အင်တာ တိုက်စစ်မှူး ရိုမီရို လူကာကူ ကို ပြောင်းလဲ ပစ်မှတ် ထား လာခဲ့တယ် လို့လည်း သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ ကစား သမားသစ် ဒွန်နီ ဗန်ဒီဘိ ကတော့ ယူနိုက်တက် နဲ့ နယ်သာလန် ကစား သမားတွေ ရဲ့ ပတ်သက် ဆက်နွယ်မှုတွေဟာ သူ့ကို အသင်း ပြောင်းရွှေ့ လာအောင် ဆွဲဆောင် ခဲ့ပါတယ် လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အဲဗာတန် နည်းပြ ရော်နယ်ကိုးမန်း ကတော့ တောင်ပံ ကစား သမား အဲလက်စ် အီဝိုဘီ နဲ့ တိုက်စစ်မှူး မွိုက်စ်ကင်း တို့ ကို အပြောင်း အရွှေ့ မပိတ်မီ ရောင်းထုတ် သွားဖို့ စိတ်ကူး နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဘိုင်ယန် မြုးနစ် တိုက်စစ်မှူးကြီး ရောဘတ် လီဝန်ဒေါ့စကီး ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ အတွက် ဘွန်ဒစ်လီဂါ ရဲ့ တစ်ရာသီ အကောင်းဆုံး ကစား သမား ဆုကို ဆွတ်ခူး ရရှိ ခဲ့တယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
အိုက်စလန် မှာ ကိုဗစ် စည်းမျဉ်းတွေ ကို ချိုးဖောက် ခဲ့တာကြောင့် နာမည်ကြီး ခဲ့တဲ့ မန်စီးတီး လူငယ် ဖီးလ်ဖိုဒန် နဲ့ မန်ယူနိုက်တက် လူငယ် မေဆင် ဂရင်းဝုဒ် တို့ ဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အတွက် Golden Boy စကာတင် အယောက် ၄၀ စာရင်း မှာ ပါဝင် ခဲ့တယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။ ဒီဆု ဟာ အသက် ၂၁ နှစ် အောက် လူငယ် ကစား သမားတွေကို နှစ်စဉ် ပေးအပ်တဲ့ ဆုဖြစ်ပြီး ဒီနှစ် အတွက် အာလင်း ဟာလန်း နဲ့ ဂျေဒန် ဆန်ချို တို့ က ရေပန်း စားနေ ခဲ့ ပါတယ် ။
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် သက်တမ်း 147 နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ မက်ကလပ်စ်ဖီးလ် တောင်း အသင်း ဟာ အကြွေး ပေါင် ၅ သိန်း တင် ရှိ ခဲ့ပြီး အဆိုပါ အကြွေးကို မပေးချေ နိုင်တာကြောင့် ဒေဝါလီ ခံရတော့ မယ်လို့ သတင်း ကြား သိရ ပါတယ် ။
အင်္ဂလန် အစိုးရ ဟာ ယခု အပတ် မှာ ကစား မယ့် အင်္ဂလိပ် ဘောလုံး ပွဲစဉ်တွေ ထဲက ပွဲစဉ် ၁၀ ပွဲ မှာ ပရိသတ်တွေ ကို ကွင်းထဲ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုခွင့် ပြုဖို့ စီစဉ် လိုက်ပြီလို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။ ကွင်း တစ်ကွင်း စီမှာ ပရိသတ် ၁၀၀၀ စီ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှု ခွင့် ရမှာ ဖြစ်ပြီး ဒါဟာ တိုးတက်မှု ရဲ့ အစ ခြေလှမ်း ဖြစ်လာ နိုင်တယ် လို့ သုံးသပ် ထားခဲ့ ကြပါတယ်
ဟက်ထရစ် မရမှုအပေါ် အသက်အရွယ်ကို အကြောင်းပြခဲ့တဲ့ ဇလာတန်
ဒီခံစစ်နဲ့ ဆိုရင် ဘယ်တော့မှ ဖလားရမှာ မဟုတ်ဘူူးလို့ ပေါက်ကွဲလိုက်တဲ့ ဂယ်ရီ နဗီးလ်
အီဒင် ဟာဇက် ဟာ ဇီဒန်း အတွက် ဒုတိယ ဂါရတ်ဘေးလ် ဖြစ်လာတော့မှာလား ?